Ukukhipha ukwelashwa kokushisa ukushisa kwepayipi, ukunciphisa ukulungiswa
Ikhaya / Izicelo / Ukukhishwa kwe-Induction / Ukushisa Ukushisa
Isigaba: Ukukhishwa kwe-Induction Tags: ukufakwa kwe-welding preheat welding, ukufakwa kwe-preheat welding machine, inqubo yokungeniswa kwe-preheat welding, umshini wokushisa wokufakelwa, ukwelashwa kwangaphambi kokuhlinzwa, preheating lokungeniswa lokungeniswa, ukushisa ukushisa, preheating lokungenisela i-welding, preheating umshini Welding, I-PWHT
Kuyini ukukhipha isingeniso?
Ukukhipha ukushisa kuyindlela lapho izinto zokwakha noma izinto ezisebenza ngayo kushiswa ngokufakwa ngaphakathi ngaphambi kokuqhutshwa phambili. Izizathu zokushisa ngaphambi kokushisa ziyahlukahluka. Embonini yekhebula neyocingo, amakhebula wekhebula asephambi kokushisa ngaphambi kokukhipha i-extrusion. Ama-Steels ama-strips ayengaphambi kokushisa ngaphambi kokucubungula kanye nokugqoka i-zinc. Ukukhipha ukushisa nokunciphisa umzimba kuyanciphisa izinsimbi ngaphambi kokugoba, futhi kulungisa amashubhu namapayipi wokudabuka. Izixazululo zeselula ukulungiselela ukulungisa ukulungiswa kwe-onsite kwemihlangano ethwele.
I-DAWEI Induction yokucubungula izinhlelo ziphumelela ngokweqile, okuholela ekutheni ukonga okukhulu kwamandla. Lapho ulungisa izinsimbi ze-steel kanye nekhebula ne-wire, ama-redode rectifiers aqinisekisa amandla okuhlala e-0.95, ngaleyo ndlela aqeda izindleko zamandla asebenzayo. Izikhathi zokujikeleza zifushane, futhi. Futhi ukufana okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo kusho ukuthi ikhoyili eyodwa ingakwazi ukusingatha ububanzi obubanzi bokukhiqiza. Izindlela zokucubungula izindlu zihlangene futhi kulula ukuzihlanganisa emigqeni yokukhiqiza ekhona noma ehleliwe.
Ukukhipha ukushisa isetshenziswa ezimakethe, ezimishini, e-aeronautical, electrotechnical, ezimhlophe nezimakethe zokwakha umkhumbi. Indawo enkulu yokusetshenziswa ukulungiselela ukushisa. I-MYD uchungechunge lwe-air cooling induction heat systems lusetshenziswa emkhakheni we-offshore ukwenzela ukushisa kwe-weld onsite. I-MYD uchungechunge lwe-air cooling unit units livame ukuqhutshelwa ezindaweni zamapulatifomu nasezikhungweni zezindiza ukuze kwenziwe ukulungiswa nokugcinwa.
Iyiphi imishini etholakalayo?
I-MYD yokupholisa umoya ukukhipha ukushisa izinhlelo ezisetshenziswa ngokuyinhloko ukushisa ukushisa kwe-weld ukushisa inqubo.
Thumela Umshini Wokushisa Okushisa Okushisa Nge-Welding
I-PWHT Equipment-Post Post Ukushisa Okushisa